Saadaasha Madaxweynaha iyo ku xigeenka ay shacabka reer Somaliland dooran doonaan ( Daawo warbixin laga diyaariyey ) | Awdalpress.com
Saadaasha Madaxweynaha iyo ku xigeenka ay shacabka reer Somaliland dooran doonaan ( Daawo warbixin laga diyaariyey )
Waxa Daabacay staff-reporter on Nov 4th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Doorashada sannadkan ka dhacaysa Somaliland ayaa ah mid aad iyo aad u adag, waa mid in la saadaaliyaa ay dhib badan tahay. Waxana ay u eg tahay doorasho guul iyo guul darro mid uun ugu dhammaan doonta shacabka, dalka iyo xisbiyada tartamaya.
Ka suxufi ahaan ( Ahmedweli Goth ), way igu adag tahay in aan dadka reer Somaliland uga sheekeeyo ama u qaybiyo qabiil, waxase ay dadka siyaasadda Somaliland faalleeyaa ka eegaan dhinaca qabyaaladda iyo gobolladu sida ay u kala taageersan yihiin musharrixiinta. Maaddaama aanu mabda’ iyo wax la mid ahi meesha ku jirin. Laakiin natiijada doorashadu waa mid inna hor iman doonta 13ka bisha November wixii ka danbeeya.
Shabakadda Awdalpress.com ayaa iyadu ka maagtay in ay soo nashriso hab beeleedka shirarka loo qabto, ee taageerada amma diidmada lagu muujiyo. Waxanan u aragnaa in muuqaalladaa qabiil ay yihiin arrimo ama mooshinno ay shakhsiyaad soo abaabuleen, iyaga oo dano gaar ah leh. Shacabkana u isticmaalaya food-saar. Isla markaana ka been sheegaya rabitaanka shacabka. Taasi oo dhaawac ku ah damiirka iyo siyaasadda xisbiyada amma xisbiyadaba sumcaddooda wiiqaysa.
Sidoo kale waxa naga reebban in aan bar tilmaameedsanno shakhsiyaadka tartamaya amma taageerayaasha u ah xisbiyada. Inkasta oo ay dhalliishu mararka qaar tahay toosin, sidaasi daraaddeed ay jiraan shakhsiyaad aan ku aragno dhalliilo waaweyn oo siyaasadeed amma wax ma tarayaal ah, oo xisbi walba ku jira. Gaar ahaanna waxa aan shacabka reer Awdal farta ugu fiiqnaa ama dhalliishooda si guud ugu sheegnaa siyaasiyiinta socod baradka ah ee ka soo jeeda gobollada galbeeda. Ee ku mirqaansan qabyaaladda iyo kala qoqobka shacabka, waxanan leenahay waa in ay da’yartu ka foojignaadaan.
Sidaasi daraaddeed, awdalpress.com waxa ay bannaanka iska taagtay qabyaaladda loo kala qaybiyey shacabka iyo mabda’ la’aanta aanay shacabku wax mabda’ ah ku kala dooranayn musharrixiinta. Xaalku marka uu halkaa marayana waxa aan ka Awdalpress editor ( Ahmedweli Goth ) ahaan u sheegayaa shacabka aadka noo xiiseeya in aannaan shaqo ku yeelan doonin arrimo qabiil. Haddii aan hore ugu khaldannayna waxan shacabka u soo jeedinayaa reelli gelin.
Haddaba haddii aan si kale u eegno doorashada iyo ifafaalaha sida la qiyaasi karo, waxa aan idiin soo gudbinaynaa warbixin laga diyaariyey doorashada iyo saadaasha doorashada.
La soco faallooyin xaqiiqda ka tarjumaya oo aan soo qori doonno. Iyo rabitaanka shacabka da’da yar oo aan hoosta uga xarriiqi doonno sida ay jecel yihiin.
This post has been viewed 14575 times.